आर्थिक अभियान:प्रदेश ०२
मूल्य निर्धारण नहुँदै सर्लाहीमा उखु काट्न शुरू
सर्लाही । सलाहीका उखु उत्पादक किसानले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै धमाधम उखु काट्न थालेका छन् । खेतमा भएको उखु निकालेर हिउँदेबाली लगाउन ढिलो भएकाले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै जिल्लाका किसानले उखु काट्न थालेका हुन् । सरकारले उखुको समर्थन विक्री मूल्य निर्धारण नगरेसम्म हतार गरेर किसानले उखु काट्न न...
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरिशन प्रदेश नं २ द्वारा ५ महीनामा १४ करोड बराबरको नून विक्री
पुस १४, वीरगञ्ज । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरिशन लिमिटेड प्रदेश नं २ कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महीनाका अवधिमा कुल रू. चौध करोड मूल्य बराबरको नूनजन्य सामग्री विक्री गर्न सफल भएको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मका अवधिमा कुल रू. चौध करोड ३५ लाख २५ हजार ३२५...
रौतहटमा भारतीय जीप दूर्घटना : चार जनाको मृत्यु, तीन घाइते
पुस १३, रौतहट । रौतहटमा भारतीय नम्बर प्लेटको जीप दूर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् । गरूडा नगरपालिका वडा नम्बर १ जयनगरमा मंगलवार सवा ४ बजेतिर दूर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार जीपमा सात जना सवार थिए जसमध्ये चार जन...
स्रोत नखुलेको १६ लाख नगदसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
पुस ११, बारा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले स्रोत नखुलेको रू. १६ लाख नगदसहित एक जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया उपमहानगरपालिकाको वडा नं १० स्थित मटिअर्वा चोकमा खटिएको प्रहरी टोलीले जाँचका क्रममा भारतको विहार मोतिहारी जिल्ला ग्राम पञ्च...
खेतीको समयमा नै मल नपाउँदा सर्लाहीका किसान चिन्तित
पुस ११, सर्लाही । यहाँका किसान अहिले मलखाद नपाएर चिन्तित बनेका छन् । हिउँदेबालीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने सर्लाहीमा आवश्यक मात्रामा मलखाद नपाउँदा किसानले लगाएको बाली बिग्रिने चिन्ता बढेको छ । जिल्लामा अहिले गहुँबालीको समय रहेको र गहुँबालीमा मल हाल्न नपाउँदा आफूहरुको मेहनत खेर जानेचिन्ता बढेको कि...
भन्सार छलिएको सामान पर्सा प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानमा बुझायो
पुस १०, वीरगञ्ज । भन्सार छलेर बीलविजकभन्दा बढी मालसामान बोकेको ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको छ । लत्ताकपडा तथा खुद्रा मालबस्तुहरू लोड गरी वीरगञ्जबाट हेटौंडा जाँदै गरेको शुक्रवार राति वीरगञ्जको घण्टाघरबाट नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प...
इन्धन र सवारी आयात वृद्धि हुँदा वीरगञ्ज भन्सारले संकलन गर्‍यो ८८ अर्ब राजस्व
पुस ८, वीरगञ्ज । देशकै मुख्य व्यापारीक नाका वीरगञ्जबाट आयात तथा निर्यात बढेसँगै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा उलेख्य सुधार भएकोे छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनाको तुलनामा चालू आवको पहिलो पाँच महीनामा यस कार्यालयले ५२ प्रतिशत भन्दाबढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएकोे हो । ...
विद्युत् सबस्टेशन बन्ने भएपछि सर्वसाधारण उत्साहित
महोत्तरी । आफ्नै ठाउँमा विद्युत् वितरणलाई व्यवस्थित र अत्याधुनिक बनाउन विद्युत् सबस्टेशन निर्माणको काम अघि बढेपछि महोत्तरीको बर्दिवास भेगका बासिन्दा उत्साहित भएका छन् । प्रदेश नं २ का आठवटै जिल्लामा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने गरी सबस्टेशन निर्माणको काम थालिएपछि यस भेगका सर्...
नक्कली नेपाली नोटसहित दुई जना भारतीय पक्राउ
पुस ५, सर्लाही । सर्लाहीको मलंगवाबाट नक्कली नेपाली नोटसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । उनीहरूको साथबाट रू. एक लाख १५ हजार बराबरको नेपाली नक्कली नोट बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बल सर्लाहीले जानकारी दिएको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतको सोनवर्षाका ३७ वर्षीय सुरेन्द्र महतो (आषिश) र ४८ वर्ष...
सुक्खा बन्दरगाहको मुआब्जा वितरण नहुँदा समस्या, पहुँच भएकाले मात्रै मुआब्जा पाएको पीडितको गुनासो
पुस ५, वीरगञ्ज। वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म वितरण हुन नसक्दा अधिकांश जग्गाधनी मर्कामा परेका छन् । सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियाको ६२ बीघा जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा लामो समय वितिसक्दा पनि हालसम्म स्थ...
प्रदेशको नाम मधेस राखेको विरोधमा मुख्यमन्त्री राउतको घरमा ढुंगा हान्ने पक्राउ